तपाईंहरू अन्याय नगर्नुस्, प्रधानमन्त्री बालाई विश्राम गर्न दिनुस् : गगन थापा - Nepal's Digital News Paper
प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ बढाइएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यी सबै काम गर्न इच्छाशक्ति राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, इच्छाशक्ति मात्रै सबै कुरा होइन । शारीरिक स्वास्थ्यले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।
कार्यकारिणी प्रमुख एकैपटक लामो समय देशबाहिर बस्दा एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मर्यादा आदिमा जोखिमको प्रश्न त छँदै छ । प्रत्येक दुई–तीन महिनामा १०–१२ दिन विदेश गएर टेलिप्रिजेन्समार्फत मन्त्रीहरूको ब्रिफिङ लिएर देश चलाउने कुराबाट शासकीय जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएको भए फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर कष्ट दिएर भए पनि प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको अपेक्षा राख्न स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, यहाँ यस्तो छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ । संसद्ले सजिलैसँग नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न सक्छ । प्रधानमन्त्री हुनुभएको एक से एक व्यक्ति यो पार्टीमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । त्यो बेलामा विश्राम लिन हामीले किन चाहिरहेका छैनौं ?
मैले धेरै पटक कम्युनिस्ट पार्टीका युवा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बा भनेर सम्बोधन गरेको सुनेको छु । प्रधानमन्त्री हाम्रा पनि बा हुनुहुन्छ । हामी हाम्रो बा बिरामी हुनुभएको भए के भन्थ्यौं– बा आराम गर्नुस् । बा विश्राम लिनुस् । बा आराम गर्नुस् । हामी किन प्रधानमन्त्री बालाई यसो भन्न सक्दैनौं ? यो गल्ती हिजो हामीले पनि गर्यौं । यो अन्याय हामीले पनि गर्यौं । सबैभन्दा बढी नजिकमा बस्नेले अन्याय गर्यो । यो अन्याय तपाईंहरु नगर्नुस् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुस् । किनकि नेपालको आन्दोलनमा यत्रो ठूलो योगदान पुर्याउनुभयो, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यत्रो ठूलो योगदान पुर्याउनुभयो । यत्रो ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश